Win Hein | White Boy Learning Burmese
Author Archives: Win Hein
by Win Hein	Leaveacomment
What I find absolutely hilarious, is the rare situation in which I understand Burmese better thananative of Myanmar. This blogger, Dr. Abdul Rahman Zafrudin, isaRohingya political activist who frequently head-hunts anyone he suspects of being anti-Rohingya. To him, this means bascially any person from Burma who is notaRohingya or another ethnic person who is not (at least nominally) adherant to the Islamic faith. In this blog post, he misinterprets both of Ven. Ravika’s posts (Ven. Ravika isamonk in my hometown and I’m well-aware of his political views. Although politics do not interest me, mis-interpretation and mis-quoting of statements does) and thus labels Ven. Ravika asaracist. What he fails to understand is that Ravika, beingaresident of the U.S., does indeed have freedom of speech and of the press.
More importantly, the translation of Ravika’s first phrase is inaccurate. Here isabetter translation:
[i] When I observe these troublemakers, I notice that rather than being Burman, they tend to be Indians, Chinese, and multi-ethnic individuals who have taken Burman names. It’s evident that they are not recognized as pure Burmans by the Burmans themselves.
They appeal to the groups that don’t like the Burmese and reap the financial benefits therein. The way I see it, is that if the indigenous peoples and democrats had come to power [in the past], these impure [people] would be flattering the public servants in order to corrupt them. (NOTE: Meaning, it’s not really about ethnic power, but using your ethnicity asaways and means to get your way.)
Let’s get rid of these pieces of trash for our country[‘s sake].[/i]
It should be pointed out that Ravika is not talking about all minorities, but these particular ones that are abusing powers and making other minorities look bad. Ravika is himself Mon and not Burman. Thus he is also included in the “not recognized” category. As for the “flattering the public servants” section, I’m sure he means that the indigenous non-Burmese public servants would be swayed by the appeals of the Rohingya and other minorities leading to just about the same amount of corruption that Burma has now.
Regarding the Chin soldiers, the context must be reviewed in that second post. He is talking about Chin soldiers from the “sticks” of Burma, not educated individuals living inametropolitan society, like the many soldiers in the Myanmar military. So, of course they are (ရိုင်း) compared to them. However, he also mentions that those Chin are banding with the Burmese under Gen. Khin Nyunt in order to get food. Context people.
Dr. Ko Ko Gyi, you’re engaging in the exact same things that Ravika warned about: you’re using your ethnicity and authority given to you by foreigners who pamper you out of disgust of the Burmans to try to promote your political agenda. I for one, am not at all swayed by your pseudo-intellectualism.
That’s as political as this blog will go.
by Win Hein	18 Comments
လုံး​ဝ​မေ​ရး​တာ​ၾ​ကာ​ၿ​ပီ​ေ​နာ​္။ တ​ကယ္ကို ေ​တာ​င​္း​ပန္ပါ​တ​ယ​္၊ သနား​စရာ​ေ​ကာ​င​္း​တဲ့ ပ​ရိတ္သ​တ​္ေ​တြ​ရ​ယ​္။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​လ​ည​္း ပ​ရိတ္သ​တ​္ အားလုံး​ကို​လြ​မ​္း​တ​ယ​္။ ကဲ… က်​မ​ယ​္ေ​ဟ့!
Facebookမွာ​ဖြဲ​႕​တဲ့ အဖြဲ​႕​တစ္ခု​မွာ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​ပါ​ဝင္ခဲ့​တ​ယ​္။ Burmese Uncensored Memes (BUM)လို​ေ​ခ​ၚ​ၿ​ပီး ျ​မန္မာ​စာ​နဲ​႔​၎၊ အဂၤ​လိပ္စာ​နဲ​႔​၎ Meme အမ်ိ​ဳးမ်ိ​ဳး​ထ​ည​့္​တ​ယ​္။ တစ္ခ်ိ​ဳ​႕​ဆို​ရ​င​္ တ​ကယ္ရယ္စ​ရာ​ေ​ကာ​င​္း​တ​ယ​္။ တစ္ခ်ိ​ဳ​႕​မွာ​ေ​တာ့ Meme အေ​ျ​ခ​ခံ​ပုံ​ကို​သုံး​တာ​မွား​ၿ​ပီး ဟာ​သ​ကို လုံး​ဝ​သေ​ဘာ​မေ​ပါ​က​္ႏိုင္ဘူး။ ဒါ​ေ​ပ​မဲ့ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​့္​အတြက္က်ေ​တာ့ အဆ​င​္ေျ​ပ​ပါ​တ​ယ​္။ ဘာ​လို​႔​လဲဆို​ေ​တာ့ အဲ​ဒီ​အဖြဲ​႕​ထဲ​မွာ ျ​မန္မာ​ဘ​န​္း​စကား​ေ​တြ​ၿ​ပီး စကား​ေျ​ပာ​ပုံစံ​ကို မွတ္ခ်​က​္ (comment)ေ​တြ​အား​ျ​ဖ​င​့္ သ​င​္ေ​န​တ​ယ​္။
ဒါ​ေ​ပ​မဲ့​လို​႔ တစ္ခါ​တ​စ​္ေ​လ​မွာ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ ျ​မန္မာ​လူမ်ိ​ဳး​မ​ဟုတ္လို​႔ ဟာ​သေ​တြ​ကို တိ​တိက်က်​သေ​ဘာ​ေ​ပါက္တာ​က ေ​တာ​္ေ​တာ​္​ကို ခက္ပါ​တ​ယ​္။ ဒီ​တစ္ပတ္မွ ထ​ည​့္ေ​န​တဲ့ Meme တစ္ခ်ိ​ဳ​႕​က ဒီ “လ​င​္း​သို​က​္ၫႊ​န​္​႔”ဆို​တဲ့​လူ​နဲ​႔​ပတ္သ​တ​္ေ​န​တ​ယ​္။ ထ​ည​့္​ၿ​ပီး​ရင္လ​ည​္း လူ​ေ​တြ​က အၿ​မဲ​တ​မ​္း “See you at the top!” (ျ​မန္မာ: “[ေ​လာ​က]ေ​ပ​ၚ​မွာ​ေ​တြ​႕​မ​ယ​္ေ​နာ​္”တဲ့။ သူ​႕ေ​ျ​ပာခ်င္တဲ့​သေ​ဘာ​က ေ​အာ​င​္ျ​မ​င​္ျ​ခ​င​္း​ရ​ၿ​ပီ​ဆို​ေ​တာ့ ဒီ​ေ​လာ​က​ႀ​ကီး​မွာ​ရွိ​တဲ့​လူ​ေ​တြ​အားလုံး​ထ​က​္ ေ​ပ​ၚ​လာ​ေ​န​ၿ​ပီ။)လို​႔ေ​ျ​ပာ​ေ​န​တဲ့​တြ​က​္ေ​ၾ​ကာ​င​့္​မို​႔​လို​႔ ဒီ ေ​ကာင္က ဘယ္သူ​လဲဆို​တာ​ကို သိခ်င္ခဲ့​တ​ယ​္။ ဆို​ေ​တာ့ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​့္ Profileမွာ “မူ​ရ​င​္း လ​င​္း​သို​က​္ၫႊ​န​္​႔ ဗြီ​ဒီ​ယို က​ၽြ​န​္ေ​တာ​့္​ကို ျ​ပေ​ပး​ပါ”လို​႔ ေ​တာ​င​္း​ဆို​ၿ​ပီး ဒါ (http://www.youtube.com/watch?v=G43bG-2sNDs) ကေ​န ခဏ​ပဲ​ၾ​က​ည​့္​တ​ယ​္။
ၿ​ပီး​ေ​အာ​င​္​ၾ​က​ည​့္​လို​႔ မ​ရ​ဘူး။ ဘာ​လို​႔​လဲဆို​ေ​တာ့ အဲ​ေ​ကာင္က အဂၤ​လိ​ပ​္ နဲ​႔ ဗမာ​ၾ​ကား အၿ​မဲ​တ​မ​္းေျ​ပာ​ေ​န​မို​႔​လို​႔ (တ​ကယ္ကို အဂၤ​လိပ္လို​ေျ​ပာ​ေ​န​တာ မ​ဟုတ္ဘူး။ သူ ျ​မန္မာ​လို​ေျ​ပာ​ၿ​ပီး အဂၤ​လိပ္စ​ကား​လုံး ဒီ​မွာ တစ္လုံး၊ ဟို​မွာ ႏွစ္လုံး ထ​ည​့္​လို​က​္​ၿ​ပီး အားလုံး​က တ​ကယ္ကို သေ​ဘာ​ေ​ပါက္သ​လို​ေ​နေ​န​ၾ​က​တ​ယ​္။) က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ အေ​တ​အေ​ပ​ခံ​လို​႔​မ​ရေ​တာ့​ၿ​ပီး ပိတ္လိုက္တ​ယ​္။
တ​က​ယ​့္​ကို သေ​ဘာ​မေ​ပါ​က​္ႏိုင္ပါ​ဘူး။ သူ​က ျ​မန္မာ​ျ​ပည္မွာ ျ​မန္မာ​ျ​ပည္သား​ေ​တြ​ကို ေ​အာ​င​္ျ​မင္မႈ​တို​႔ ဘာ​တို​႔​အေ​ၾ​ကာ​င​္းေျ​ပာ​ေ​န​ၿ​ပီး အဂၤ​လိပ္စ​ကား​လုံး​အမ်ား​ႀ​ကီး​သုံး​တ​ယ​္။ ဟ​င​္း? အားလုံး​နား​မည္မွာ​မ​ဟုတ္ဘူး​လို​႔​ထင္ပါ​တယ္ဗ်။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ေ​တာင္မွ သူ​႕ေ​ျ​ပာခ်င္တဲ့​သေ​ဘာ​ေ​တြ​ကို တိ​တိက်က်​သေ​ဘာ​မေ​ပါက္ဘူး။ အဲ​ဒါ​နဲ​႔ သူ​ဘာ​လု​ပ​္ေ​န​လဲဆို​တာ​ကို စ​ဥ​္း​စား​ၾ​က​ည​့္​ရေ​အာ​င​္ေ​နာ​္။
၁. ျ​မန္မာ​စကား​မွာ သူ​႕ေ​ျ​ပာခ်င္တဲ့​ဟာ​ေ​တြ​အတြ​က​္ စကားလုံး​ေ​တြ​မ​ရွိ​လို​႔ အဂၤ​လိပ္လို​ေျ​ပာ​ရ​မ​ယ​္။
၂. သူ​ႂ​ကြားခ်င္လို​႔ လုပ္တာ…
နံ​ပါ​တ​္ တ​စ​္ နဲ​႔​ပတ္သ​တ​္​ၿ​ပီး​ဆို​ရ​င​္… ဟ​င​့္​အင​္။ ေ​ဆာ​ရီ။ အဲ​ဒါ့​ကို လက္မ​ခံႏ​ိုင္ဘူး။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ မ​ပိုင္ဆို​င​္ေ​ပ​မ​ယ​့္ ျ​မန္မာ​ျ​ပည္သြား​တု​န​္း​က “စာ​ေ​ပေ​လာ​က”ဆို​တဲ့ စာ​အုပ္ဆိုင္ထဲ​မွာ စီး​ပြား​ေ​ရး​နဲ​႔​ပတ္သတ္တဲ့ စာ​အုပ္နဲ​႔ အဘိ​ဓာ​န​္ အမ်ား​ႀ​ကီး​ရွိ​တ​ယ​္။ ျ​မန္မာ​အဘိ​ဓာ​န​္ေ​တြေ​ပါ့​ေ​နာ​္။ ျ​မန္မာ စီး​ပြား​ေ​ရး​အဘိ​ဓာ​န​္ေ​တြ​ရွိ​မယ္ဆို​ရ​င​္ေ​တာ့ ျ​မန္မာ​စကား​မွာ ဟို​စကားလုံး​ေ​တြ​အတြ​က​္ ဘာသာ​ျ​ပန္ရွိ​လိ​မ​့္​မ​ယ​္။ ဥပမာ:
Growth: ဒီ​အေ​ျ​ခ​အေ​န​မွာ growthက improvementနဲ​႔ အဓိ​ပ​ၸာယ္တူ​တယ္ဆို​ေ​တာ့ “တိုး​တက္မႈ”လို​႔ေ​ျ​ပာ​လို​႔​ရ​တ​ယ​္။
Develop: သူ​အၿ​မဲ​တ​မ​္း လူ​င​ယ​္ေ​တြ​ကို ဘယ​္ေ​လာ​က​္ “develop”ေ​စခ်င္လဲ​ဆို​တာ​ကို ေျ​ပာ​ေ​န​လို​႔ ဒီ​အေ​ျ​ခ​အေ​န​မွာ developက “ႀ​ကီး​ထြား​သ​ည​္”နဲ​႔​တူ​တ​ယ​္။
Participate: ဒါ​ကို ျ​မန်​မာ​လို​ေျ​ပာ​တာ အရ​မ​္း​ရိုး​ရှ​င​္း​တ​ယ​္။ “နွှဲ​သ​ည​္” ဒါ​မှ​မဟုတ်​ရ​င​္ “ပါဝင်​သ​ည​္”
Terrain: ဒီ​စကားလုံး​မွာ ဘာသာ​ျ​ပန္တာ အမ်ား​ႀ​ကီး​ရွိ​တ​ယ​္။ ဒါ​ေ​ပ​မဲ့ လ​င​္း​သို​က​္ၫႊ​န​္​႔ terrainလို​႔ေ​ျ​ပာ​တဲ့​အခါ သူ​က ဒီ​လို​သုံး​တ​ယ​္: “လူ​င​ယ​္ေ​တြ​ကို ဒီ​ေ​ဗ​လု​ပ​္ျ​ဖစ္ဖို​႔ ထိ​ရိ​န​္းေ​ပး​ေ​န​တာ​ပါ”လို​႔ ေျ​ပာ​တ​ယ​္။ ဒီ အေ​ျ​ခ​အေ​န​မွာ​ေ​တာ့ terrainက အေ​ျ​ခ​ခံ​နဲ​႔​တူ​တ​ယ​္။ Terrain ရဲ​႕ သ​ဒ​ၵါ​နက္က်ေ​တာ့ “ေျ​မျ​ပ​င​္”ျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ​္။ ဒါ​ေ​ပ​မဲ့ ဒီ​မွာ သုံး​တာ အဆ​င​္ေျ​ပ​မွာ မ​ဟုတ္ဘူး။
သူ အားလုံး​ကို ေ​အာ​င​္ျ​မ​င​္ေ​စခ်င္တယ္ဆို​လို​႔ခ်င္ရ​င​္ ဘာ​ျ​ဖစ္လို​႔ အားလုံး​နား​လ​ည​္ႏိုင္တဲ့​စကားမ​သုံး​တာ​လဲ။ ေ​တာ​င​္း​ပန္ပါ​တ​ယ​္ ဒါ​ေ​ပ​မဲ့ ေျ​ပာ​သ​င​့္​တ​ယ​္။ ျ​မန္မာ​ျ​ပည္သား​တို​င​္း အဂၤ​လိပ္လို ေ​ကာ​င​္းေ​ကာ​င​္းေျ​ပာ​တတ္တာ မ​ဟုတ္ဘူး။ အဲ​ဒါ​ေ​တာ့ မ​ဆိုး​ဘူး​ေ​လ။ ဘာ​လို​႔ေ​ျ​ပာ​တတ္ရ​မွာ​လဲ။ ပိုက္ဆံ​ရ​ဖို​႔​လုံခ်​ည​္ေ​တြ ခ်ဳ​ပ​္​ၿ​ပီး အဲ​ဒါ​နဲ​႔​ပဲ ေက်​နပ္ရ​င​္ အဂၤ​လိပ္လို ေျ​ပာ​တတ္စ​ရာ​မ​လို​ဘူး။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ အား​လ​ည​္း အား​ေ​ပး​တ​ယ​္၊ ဂုဏ္လ​ည​္း ဂုဏ္ယူ​တ​ယ​္။ အဂၤ​လိပ္စ​ကား​က ေ​အာ​င​္ျ​မ​င​္ျ​ခ​င​္း​ရ​ဖို​႔ လို​အပ္ခ်က္တစ္ခု​ျ​ဖစ္ရ​မွာ မ​ဟုတ္ဘူး။ တို​႔ အေ​မ​ရီ​ကား​ျ​ပည္သား​ေ​တြ အရ​မ​္း ျ​ပ​င​္ေ​န​ၿ​ပီ။ မ်ား​ေ​သာ​အား​ျ​ဖ​င​့္ ႏိုင္ငံ​ျ​ခား​စကား​ေ​တြ​ကို သင္ဖို​႔ မ​ႀ​ကိ​ဳး​စား​ဘူး။ ဘာ​လို​႔​လဲဆို​ေ​တာ အားလုံး​က ကို​ယ​့္​တို​႔ စကား​ကို​သင္ရ​င​္ေ​တာ့ အက်ိ​ဳး​မ​ရွိ​ဘူး။
ကဲ ဆရာ​ႀ​ကီး လ​င​္း​သို​က​္ၫႊ​န​္​႔​ကို ျ​ပန္ရေ​အာ​င​္…
ပ​ထ​မခ်​က​္ မ​မွန္ဘူး​ဆို​ရ​င​္… ခ်က္တစ္ခု​ပဲ​ရွိ​ေ​သး​တ​ယ​္… သူ​ႂ​ကြားခ်င္လို​႔ အဂၤ​လိပ္သုံး​တ​ယ​္
ေ​အး​ေ​လ။ အဲ​ဒါ​ကေ​တာ့ သိ​ပ​္​ၿ​ပီး​ေ​တာ့ မ​ထူး​ဆ​န​္း​ဘူး။ အားလုံး​ပဲ​လုပ္တ​ယ​္။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​့္ ဘာသာ​ေ​ရး ပါ​ေ​မာ​က​ၡ​ဆရာ​ဆို​ရ​င​္ တစ္ခါ​တစ္ရံ​မွာ ေ​ဟ​ၿ​ဗဲ​စကားလုံး ဒါ​မွ​မ​ဟု​တ​္ ဂ​ရိ​စကားလုံး​ေ​တြေ​ျ​ပာ​တ​ယ​္။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​လ​ည​္း အျ​ဖဴ​ေ​တြ​နဲ​႔ ျ​မန္မာ​ယ​ဥ​္ေက်း​မႈ​အေ​ၾ​ကာ​င​္းေျ​ပာ​တဲ့​အခါ ဗမာ​စကားလုံး​ေ​တြ​သုံး​တ​ယ​္။ ဒါ​ေ​ပ​မဲ့ တစ္လုံး၊ ႏွစ္လုံး​တ​ည​္း​ပဲ​ထ​က​္ ဆရာ​ႀ​ကီး​လ​င​္း​သို​က​္ၫႊ​န​္​႔ ပို​သုံး​တ​ယ​္။ ေ​နာ​က​္​ၿ​ပီး​ေ​တာ့ အဲ​ဒီ​စကားလုံး​ေ​တြ​သုံး​အစား ျ​မန္မာ​စကားလုံး​ေ​တြ​သုံး​လို​႔​ရ​တ​ယ​္။ အဲ​ဒါ​ဆို​ရ​င​္ေ​တာ့ သူ နဲ​႔ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​ၾ​ကား ဘယ္လို​ကြာ​လဲ။
က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ အျ​ဖဴ​ေ​တြ​နဲ​႔ ဗမာ​စကားလုံး​ေ​တြ​သုံး​တဲ့​အခါ သူ​တို​႔​ကို သ​င​္ေ​ပး​ဖို​႔ သုံး​ေ​န​တ​ယ​္။ “That skirt that men wear is calledaလုံခ်ည္.” … “That stinky red stuff they eat and spit is betel nut, or ကြမ္းသီး in Burmese.” သူ​လ​ည​္း တစ္ခါ​တ​စ​္ေ​လ​မွာ အဂၤ​လိပ္စ​ကား​လုံး​ေ​တြ​ရွ​င​္းျ​ပေ​ပ​မ​ယ​့္ ရွ​င​္းျ​ပ​ဖို​႔​လို​အပ္တယ္ဆို​ရ​င​္ အစ​က​တ​ည​္း​က ဗမာ​လို​ပဲ​ေျ​ပာ​ေ​လ။ အခ်ိန္ကုန္တ​ယ​္။ ေ​နာ​က​္​ၿ​ပီး​ေ​တာ့ သူ အဂၤ​လိပ္လို​ေ​ရး​တာ ေျ​ပာ​တာ မ်ား​ေ​သာ​အား​ျ​ဖ​င​့္​မ​မွန္ဘူး။ ဥပမာ:
engrishကဲ သူ​အဂၤ​လိပ္လို​ေ​ရး​ၿ​ပီ​ဆို​ေ​တာ့ အဂၤ​လိပ္လို သူ​႕​ကို ျ​ပ​င​္ေ​ပး​မ​ယ​္…
Buddha’s Instruction For Applied Success (should be Buddha’s Instructions for Applying Success)
1. Siya Karla Barvana – Continuous (Pali is wrong, I think, and should be “Continuity”)
2. Niya Maya? Barvana – Consistent (should be “Consistency”)
3. Niyanara??? Thaytha Barvana – Care small things (should be “Caring about the small things”)
4. Thatkitsa Barvana – Intersling??? (Not even an English word)
5. Ahiyati Barvana – Love Your Work (He had mostly adjectives until now, which I changed many into nouns, but now he hasaverb, so it should be “Loving Your Work”)
ဟု​တ​္​ၿ​ပီ ပို​ၿ​ပီး​ေ​ရး​ဖို​႔ အား​မ​ရွိ​ေ​တာ့​ဘူး​ဆို​ေ​တာ့ ဒါ​ပဲ​ေ​နာ​္။ ေက်း​ဇူး​ျ​ပဳ​ၿ​ပီး မွတ္ခ်​က​္ေ​တြေ​ရး​ေ​ပး​ပါ။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ မွန္လား၊ မွား​လား၊ ကို​ယ​့္ေျ​ပာခ်င္တာ​ကို မ​သိ​ဘူး​လား။ ေ​စာ​င​့္ေ​န​မ​ယ​္ေ​နာ​္။ See you at the bottom (of my blog, in the comments)!
EDIT: Sorry. It appears that I can no longer upload anything in Zawgyi font. If you can’t read unicode, read this post HERE.
လုံး​ဝ​မ​ရေး​တာ​ကြာ​ပြီနော်။ တကယ်​ကို တောင်းပန်​ပါ​တယ်၊ သနား​စရာ​ကောင်း​တဲ့ ပရိတ်​သတ်​တွေ​ရယ်။ ကျွန်တော်​လည်း ပရိတ်​သတ် အားလုံး​ကို​လွမ်း​တယ်။ ကဲ… ကျ​မယ်​ဟေ့!
Facebookမှာဖွဲ့တဲ့ အဖွဲ့​တစ်​ခု​မှာ ကျွန်တော်​ပါဝင်​ခဲ့​တယ်။ Burmese Uncensored Memes (BUM)လိုခေါ်​ပြီး မြန်မာ​စာ​နဲ့​၎င်း၊ အင်္ဂလိပ်​စာ​နဲ့​၎င်း Meme အမျိုး​မျိုး​ထည့်​တယ်။ တစ်​ချို့​ဆို​ရင် တကယ်​ရယ်​စရာ​ကောင်း​တယ်။ တစ်​ချို့​မှာ​တော့ Meme အခြေ​ခံ​ပုံ​ကို​သုံး​တာ​မှား​ပြီး ဟာ​သ​ကို လုံး​ဝ​သဘော​မ​ပေါက်​နိုင်​ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်​အတွက်​ကျ​တော့ အဆင်​ပြေ​ပါ​တယ်။ ဘာ​လို့​လဲဆို​တော့ အဲ​ဒီ​အဖွဲ့​ထဲ​မှာ မြန်မာ​ဘန်း​စကား​တွေ​ပြီး စကားပြော​ပုံစံ​ကို မှတ်ချက် (comment)တွေ​အား​ဖြင့် သင်​နေ​တယ်။
ဒါပေမဲ့လို့ တစ်​ခါ​တစ်​လေ​မှာ ကျွန်တော် မြန်မာ​လူ​မျိုး​မဟုတ်​လို့ ဟာ​သ​တွေ​ကို တိတိ​ကျ⁠ကျ​သဘောပေါက်​တာ​က တော်တော်​ကို ခက်​ပါ​တယ်။ ဒီ​တစ်​ပတ်​မှ ထည့်​နေ​တဲ့ Meme တစ်​ချို့​က ဒီ “လင်း​သိုက်​ညွှန့်”ဆို​တဲ့​လူ​နဲ့​ပတ်​သတ်​နေ​တယ်။ ထည့်​ပြီး​ရင်​လည်း လူ​တွေ​က အမြဲ​တမ်း “See you at the top!” (မြန်မာ: “[လောက]ပေါ်​မှာ​တွေ့​မယ်နော်”တဲ့။ သူ့​ပြော​ချင်​တဲ့​သဘော​က အောင်မြင်​ခြင်း​ရ​ပြီ​ဆို​တော့ ဒီ​လောက​ကြီး​မှာ​ရှိ​တဲ့​လူ​တွေ​အားလုံး​ထက် ပေါ်လာ​နေ​ပြီ။)လို့​ပြော​နေ​တဲ့​တွက်​ကြောင့်​မို့​လို့ ဒီ ကောင်​က ဘယ်​သူ​လဲဆို​တာ​ကို သိ​ချင်​ခဲ့​တယ်။ ဆို​တော့ ကျွန်တော့် Profileမှာ “မူရင်း လင်း​သိုက်​ညွှန့် ဗွီ​ဒီ​ယို ကျွန်တော့်​ကို ပြ​ပေး​ပါ”လို့ တောင်း​ဆို​ပြီး ဒါ (http://www.youtube.com/watch?v=G43bG-2sNDs) က​နေ ခဏ​ပဲ​ကြည့်​တယ်။
ပြီးအောင်ကြည့်လို့ မ​ရ​ဘူး။ ဘာ​လို့​လဲဆို​တော့ အဲ​ကောင်​က အင်္ဂလိပ် နဲ့ ဗမာ​ကြား အမြဲ​တမ်း​ပြော​နေ​မို့​လို့ (တကယ်​ကို အင်္ဂလိပ်​လို​ပြော​နေ​တာ မဟုတ်​ဘူး။ သူ မြန်မာ​လို​ပြော​ပြီး အင်္ဂလိပ်​စကားလုံး ဒီ​မှာ တစ်​လုံး၊ ဟိုမှာ နှစ်​လုံး ထည့်​လိုက်​ပြီး အားလုံး​က တကယ်​ကို သဘောပေါက်​သ​လို​နေ⁠နေ​ကြ​တယ်။) ကျွန်တော် အတေ​အပေ​ခံ​လို့​မ​ရ​တော့​ပြီး ပိတ်​လိုက်​တယ်။
တ​ကယ့်​ကို သဘော​မ​ပေါက်​နိုင်​ပါ​ဘူး။ သူ​က မြန်မာ​ပြည်​မှာ မြန်မာ​ပြည်​သား​တွေ​ကို အောင်မြင်​မှု​တို့ ဘာ​တို့​အကြောင်း​ပြော​နေ​ပြီး အင်္ဂလိပ်​စကားလုံး​အများ​ကြီး​သုံး​တယ်။ ဟင်း? အားလုံး​နား​မည်​မှာ​မဟုတ်​ဘူး​လို့​ထင်​ပါ​တယ်​ဗျ။ ကျွန်တော်​တောင်​မှ သူ့​ပြော​ချင်​တဲ့​သဘော​တွေ​ကို တိတိ​ကျ⁠ကျ​သဘော​မ​ပေါက်​ဘူး။ အဲ​ဒါ​နဲ့ သူ​ဘာ​လုပ်​နေ​လဲဆို​တာ​ကို စဉ်းစား​ကြည့်​ရ​အောင်နော်။
၁. မြန်မာ​စကား​မှာ သူ့​ပြော​ချင်​တဲ့​ဟာ​တွေ​အတွက် စကားလုံး​တွေ​မ​ရှိ​လို့ အင်္ဂလိပ်​လို​ပြော​ရ​မယ်။
၂. သူ​ကြွား​ချင်​လို့ လုပ်​တာ…
နံပါတ် တစ် နဲ့​ပတ်​သတ်​ပြီး​ဆို​ရင်… ဟင့်​အင်။ ဆော​ရီ။ အဲ​ဒါ့​ကို လက်မ​ခံ​နိုင်​ဘူး။ ကျွန်တော် မ​ပိုင်ဆိုင်​ပေ​မယ့် မြန်မာ​ပြည်​သွား​တုန်း​က “စာပေ​လောက”ဆို​တဲ့ စာအုပ်​ဆိုင်​ထဲ​မှာ စီးပွား​ရေး​နဲ့​ပတ်​သတ်​တဲ့ စာအုပ်​နဲ့ အဘိဓာန် အများ​ကြီး​ရှိ​တယ်။ မြန်မာ​အဘိဓာန်​တွေ​ပေါ့နော်။ မြန်မာ စီးပွား​ရေး​အဘိဓာန်​တွေ​ရှိ​မယ်​ဆို​ရင်​တော့ မြန်မာ​စကား​မှာ ဟို​စကားလုံး​တွေ​အတွက် ဘာသာ​ပြန်​ရှိ​လိမ့်​မယ်။ ဥပမာ:
Growth: ဒီအခြေအနေမှာ growthက improvementနဲ့ အဓိပ္ပာယ်​တူ​တယ်​ဆို​တော့ “တိုးတက်​မှု”လို့​ပြော​လို့​ရ​တယ်။
Develop: သူအမြဲတမ်း လူ​ငယ်​တွေ​ကို ဘယ်လောက် “develop”စေ​ချင်​လဲဆို​တာ​ကို ပြော​နေ​လို့ ဒီ​အခြေအနေ​မှာ developက “ကြီး​ထွား​သည်”နဲ့​တူ​တယ်။
Participate: ဒါကို မြန်မာ​လို​ပြော​တာ အရမ်း​ရိုး​ရှင်း​တယ်။ “နွှဲ​သည်” ဒါ​မှ​မဟုတ်​ရင် “ပါဝင်​သည်”
Terrain: ဒီစကားလုံးမှာ ဘာသာ​ပြန်​တာ အများ​ကြီး​ရှိ​တယ်။ ဒါပေမဲ့ လင်း​သိုက်​ညွှန့် terrainလို့​ပြော​တဲ့​အခါ သူ​က ဒီ​လို​သုံး​တယ်: “လူ​ငယ်​တွေ​ကို ဒီ​ဗေ​လုပ်​ဖြစ်​ဖို့ ထိ​ရိန်း​ပေး​နေ​တာ​ပါ”လို့ ပြော​တယ်။ ဒီ အခြေအနေ​မှာ​တော့ terrainက အခြေ​ခံ​နဲ့​တူ​တယ်။ Terrain ရဲ့ သဒ္ဒါ​နက်​ကျ​တော့ “မြေပြင်”ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ​မှာ သုံး​တာ အဆင်​ပြေ​မှာ မဟုတ်​ဘူး။
သူ အားလုံး​ကို အောင်မြင်​စေ​ချင်​တယ်​ဆို​လို့​ချင်​ရင် ဘာ​ဖြစ်​လို့ အားလုံး​နားလည်​နိုင်​တဲ့​စကားမ​သုံး​တာ​လဲ။ တောင်းပန်​ပါ​တယ် ဒါပေမဲ့ ပြော​သင့်​တယ်။ မြန်မာ​ပြည်​သား​တိုင်း အင်္ဂလိပ်​လို ကောင်း⁠ကောင်း​ပြော​တတ်​တာ မဟုတ်​ဘူး။ အဲ​ဒါ​တော့ မ​ဆိုး​ဘူး​လေ။ ဘာ​လို့​ပြော​တတ်​ရ​မှာ​လဲ။ ပိုက်ဆံ​ရ​ဖို့​လုံချည်​တွေ ချုပ်​ပြီး အဲ​ဒါ​နဲ့​ပဲ ကျေနပ်​ရင် အင်္ဂလိပ်​လို ပြော​တတ်​စရာ​မ​လို​ဘူး။ ကျွန်တော် အား​လည်း အားပေး​တယ်၊ ဂုဏ်​လည်း ဂုဏ်​ယူ​တယ်။ အင်္ဂလိပ်​စကား​က အောင်မြင်​ခြင်း​ရ​ဖို့ လို​အပ်​ချက်​တစ်​ခု​ဖြစ်​ရ​မှာ မဟုတ်​ဘူး။ တို့ အမေ​ရီ​ကား​ပြည်​သား​တွေ အရမ်း ပြင်​နေ​ပြီ။ များ​သော​အား​ဖြင့် နိုင်ငံ​ခြား​စကား​တွေ​ကို သင်​ဖို့ မ​ကြိုးစား​ဘူး။ ဘာ​လို့​လဲဆို​တော အားလုံး​က ကိုယ့်​တို့ စကား​ကို​သင်​ရင်​တော့ အကျိုး​မ​ရှိ​ဘူး။
ကဲ ဆရာ​ကြီး လင်း​သိုက်​ညွှန့်​ကို ပြန်​ရအောင်…
ပထမ​ချက် မ​မှန်​ဘူး​ဆို​ရင်… ချက်​တစ်​ခု​ပဲ​ရှိ​သေး​တယ်… သူ​ကြွား​ချင်​လို့ အင်္ဂလိပ်​သုံး​တယ်
အေး​လေ။ အဲ​ဒါ​ကတော့ သိပ်​ပြီး​တော့ မ​ထူးဆန်း​ဘူး။ အားလုံး​ပဲ​လုပ်​တယ်။ ကျွန်တော့် ဘာသာ​ရေး ပါ​မောက္ခ​ဆရာ​ဆို​ရင် တစ်​ခါ​တစ်​ရံ​မှာ ဟေဗြဲ​စကားလုံး ဒါ​မှ​မဟုတ် ဂ​ရိ​စကားလုံး​တွေ​ပြော​တယ်။ ကျွန်တော်​လည်း အဖြူ​တွေ​နဲ့ မြန်မာ​ယဉ်ကျေး​မှု​အကြောင်း​ပြော​တဲ့​အခါ ဗမာ​စကားလုံး​တွေ​သုံး​တယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်​လုံး၊ နှစ်​လုံး​တည်း​ပဲ​ထက် ဆရာ​ကြီး​လင်း​သိုက်​ညွှန့် ပို​သုံး​တယ်။ နောက်​ပြီး​တော့ အဲ​ဒီ​စကားလုံး​တွေ​သုံး​အစား မြန်မာ​စကားလုံး​တွေ​သုံး​လို့​ရ​တယ်။ အဲ​ဒါ​ဆို​ရင်​တော့ သူ နဲ့ ကျွန်တော်​ကြား ဘယ်​လို​ကွာ​လဲ။
ကျွန်တော် အဖြူ​တွေ​နဲ့ ဗမာ​စကားလုံး​တွေ​သုံး​တဲ့​အခါ သူ​တို့​ကို သင်ပေး​ဖို့ သုံး​နေ​တယ်။ “That skirt that men wear is calledaလုံချည်.” … “That stinky red stuff they eat and spit is betel nut, or ကွမ်းသီး in Burmese.” သူ​လည်း တစ်​ခါ​တစ်​လေ​မှာ အင်္ဂလိပ်​စကားလုံး​တွေ​ရှင်း​ပြ​ပေ​မယ့် ရှင်း​ပြ​ဖို့​လို​အပ်​တယ်​ဆို​ရင် အစ​ကတည်းက ဗမာ​လို​ပဲ​ပြော​လေ။ အချိန်ကုန်​တယ်။ နောက်​ပြီး​တော့ သူ အင်္ဂလိပ်​လို​ရေး​တာ ပြော​တာ များ​သော​အား​ဖြင့်​မ​မှန်​ဘူး။ ဥပမာ:
ကဲ သူ​အင်္ဂလိပ်​လို​ရေး​ပြီ​ဆို​တော့ အင်္ဂလိပ်​လို သူ့​ကို ပြင်​ပေး​မယ်…
ဟုတ်​ပြီ ပို​ပြီး​ရေး​ဖို့ အား​မ​ရှိ​တော့​ဘူး​ဆို​တော့ ဒါ​ပဲနော်။ ကျေးဇူးပြု​ပြီး မှတ်ချက်​တွေ​ရေး​ပေး​ပါ။ ကျွန်တော် မှန်​လား၊ မှား​လား၊ ကိုယ့်​ပြော​ချင်​တာ​ကို မ​သိ​ဘူး​လား။ စောင့်​နေ​မယ်နော်။ See you at the bottom (of my blog, in the comments)!
Categories: Burmese -- ျမန္မာစကား, Linguistics / ဘာသာေဗဒ | Permalink.
by Win Hein	8 Comments
Greetings, readers. It has beenawhile. Between school, family,ajob that I had forawhile, free time that I dedicated to other things, and actual study of Burmese, I have neglected all of you (and this blog) for over six months now, and I am truly sorry. To make it up to you all, I am going to use my undergraduate brain to discussatopic inspired by an individual who spoke with me on Facebook about Burmese Pronouns. The conversation wentalittle like this:
Dude: Hello, Ko Win Hein!
KWH: Hello, Dude!
Dude: Can you tell me the best pronoun to use when talking toagirl?
KWH: Well… It depends onafew things, like her age in comparison to yours, how long you’ve known her, how close you two actually are, what she wishes to be called, and the social context. Why?
Dude: Well, I wanted to tell her that she’s beautiful and I said “မင္းေလးကလွတယ္” and she acted really surprised.
KWH: I imagine so!
KWH: Long story, I’ll explain later.
Here is where I explain:
We anglos, especially ignorant, monolingual, culturally-ignorant ones are stuck inamaze. A long, complicated, and winding maze which we were forced to start running in about First grade when we learned the word “Pronoun.” That’s right, we are running around ina“Pronoun Maze” and I will now giveadefinition for it:
The winding never-ending cycle of thought that pronouns must always fall intoasystematic category of Person, Singularity/Plurality, and sometimes Honorification/Reverence.
I will give an account of my own experience. When I first sought out to learn Burmese, there wasayoung lady I knew whose father hadaB.A. in Burmese Language, whose brain I thought I could pick in giving me pronoun names. I figured it would be simple enough, like filling outatable. I would start off with the same mental blank table that students are instructed to use in foreign languages classes in school for pronouns that looksabit like this:
So, in my head and throughabit of reading in Burmese, I found that I could makeatable somewhat like this:
The problem is, I knew that the pronouns listed there for 1st and 2nd are considered quite rude (from R.F. Andrew St. John, Hon, M.A.’s grammar), and I also learned to use these pronouns from Gene Mesher’s horrible inadequate barely acceptable mediocre book “Burmese for Beginners” by Paiboon Publishing:
But later, I learned there was more to it than that. I would watch music videos and see weird-butt pronouns like this:
This one REALLY threw me off because ကုိယ္ (part of ကိုယ္ခႏၶာ) means “body” and I read from two difference sources that it could mean either the 1st Person inapoetic sense (like in this song) or the 2nd Person (example: Christians refer to God in 2nd Person with the word ကိုယ္ေတာ္.
So, the big question was, how many pronouns are there really and how do I know which ones to use at which time?! The answer to the first question is “as many as you can think of” and the answer to the second is “you will never know.” There are different variations of different pronouns. For example, ခင္ဗ်ား can also be ခင္ဗ်ာ or ဗ်ား or ဗ် depending on different situations. I’m sure if you’d be willing to doasearch here in the blog, you’ll find posts written by me where I used ခင္ဗ်ား having learned that it is the most-formal of all pronouns thataman can use to address someone, and was told that it sounds rude. My mind was blown.
So, what does one do in this situation? Assume the fetal position and rock backwards and forwards in the corner? Absolutely not! The solution to escape the Pronoun Maze is to take out your metaphorical hedge clippers, and simply cut through the edge of the maze, never to return again. I will give youafew tips:
In Burmese, names can be used in place of pronouns. Even in first-person.
It is perfectly acceptable to askaperson how they wish to be called. Just like substitute teachers in the West ask ifastudent hasacertain nickname that they prefer.
If you feel like you have the upper-hand, you may start addressing yourself inacertain way when talking to someone to passively cue them as to how you should be addressed, and they will most likely do the same to you.
Most Burmese people upon meetingaforeigner will ask the foreigner’s age as to determine whether or not to call them fromayounger or older perspective.
If you areaboy andagirl feels close to you inaweird sibling sense (upgrade from the frendzone?), they will call you ေမာင္ေလး if you are younger and အစ္ကို if you are older.
If you areagirl, you will always address younger girls as ညီမ and older girls as အစ္မ and boys will do the same in comparison of your relationship to them.
I’ve reiterated my point in the last bullet to show that once the Pronoun Maze is escaped, the whole game becomes much easier and this problem becomesadistant memory. Thanks for reading and do ask any questions in the comments, which I WILL answer. I have been trying to avoid writingalot of Burmese because this WordPress seems to have trouble when I switch between fonts. Hopefully <spoiler>if I ever get my own server</spoiler> this will bealot simpler.
Ko Win Hein
Categories: English, Linguistics / ဘာသာေဗဒ | Permalink.
by Win Hein	7 Comments
အားလုံး မဂၤလာပါ။ မေရးတာၾကာၿပီေနာ္။ ဒီေန႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အတြက္ စပိန္လိုဆိုျပတဲ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို အဂၤလိပ္ နဲ႔ ဗမာကို ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဗမာျပန္ အရမ္းမွားရင္ ျပင္ေပးပါ။ သီခ်င္းနာမည္က “Cuando Me Enamoro”ၿပီး အဆိုေတာ့္ နာမည္က “Enrique Iglesias”လို႔ေခၚၾကပါတယ္။ (ေဒါင္းလုဒ္ရမယ္ေနာ္)
by Win Hein	16 Comments
ဗမာလို သတင္းစာျပန္ – ၁
ယူနီကုဒ္ PDFကုိ ေဒါင္းလုဒ္ရန္ ဒီမွာRight-ႏွိပ္ျပီး Save As…ကုိလည္းႏွိပ္
အားလုံးမဂၤလာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ေရးအမႈအရာတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္းပါးအမ်ိဳးအသစ္ကို ေရးစပါမယ္။ ဒီေဆာင္းပါးအမ်ိဳးကို “သတင္းျပန္မ်ား”လို႔ေခၚပါမယ္။ ဘာလုပ္မွာလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဇာတိၿမိဳ႕ရဲ႕ သတင္းစာေတြက ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေ႐ြးမယ္ၿပီးေတာ့ ဗမာလိုျပန္ေရးမယ္။ ပထမေဆာင္းပါးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဇာတိၿမိဳ႕မွာ ဗမာစားေသာက္ဆိုင္အသစ္အေၾကာင္းေရးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကိုေ႐ြးပါတယ္။ Continue reading →
Categories: Burmese -- ျမန္မာစကား, News Translations | Permalink.
(ဗြီဒီယုိ) ေမးခြန္း ၂ခု
July 20, 2013 by Win Hein	7 Comments